लापरवाहीको पराकाष्ठा : वीर अस्पतालमा एकै दिन ३ सय ३१ कर्मचारीद्वारा अनुशासन उल्लंघन !
१५ कार्यालयमा छड्के अनुगमन गर्दा ४ सय ८९ कर्मचारी 'अनुशासनहीन'
काठमाडौं – आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को पहिलो डेढ महिनाको अवधिमा पेशागत अनुशासन उल्लंघन गर्ने ४ सय ८९ जना कर्मचारीलाई कारवाहीको सिफारिस भएको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गत साउन १९ देखि यही भदौ १० गतेसम्म टोली नै खटाएर काठमाडौं र ललितपुरका गरी १५ वटा सरकारी कार्यालयमा छड्के अनुगमन गरेको थियो ।
त्यसक्रममा कर्मचारीको पोशाक र समय पालनाको निगरानी गर्दा ४ सय ८९ जना कर्मचारीले पेशागत अनुशासन उल्लंघन गरेको पाइएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ ।
४ सय ४१ जनाले समय पालना नगरेको तथा ४८ जनाले तोकिएको पोशाक नलगाएको पाइयो ।
अनुगमनका क्रममा सबैभन्दा धेरै वीर अस्पतालका ३ सय ३१ कर्मचारीले पेशागत अनुशासन उल्लंघन गरेको भेटिएको थियो । त्यसमध्ये ३ सय २१ जना समयमा कार्यालय आएका थिएनन् भने १० जना कर्मचारीले सरकारले तोकेको पोशाक नलगाएको पाइयो ।
विशेष अवस्थामा बाहेक सरकारी कर्मचारीहरू अनिवार्य बिहान १० बजे कार्यालयमा उपस्थित हुनेपर्ने प्रावधान छ ।
सरकारले कर्मचारीका लागि पोशाक तोकेर त्यसबापत वार्षिक १० हजार रुपैयाँ भक्ता समेत उपलब्ध गराउने गरेको छ ।
यसैगरी कान्ति बाल अस्पताल महाराजगञ्जका ५४ जना कर्मचारीले पनि पेशागत अनुशासन उल्लंघन गरेको पाइयो । त्यसमध्ये ५० जनाले कार्यालय समयको पालना गरेका थिएनन् भने ४ जना तोकिएको पोशाक नलगाइ उपस्थित भएका सतर्कता केन्द्रले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
यसका अलावा ललितपुर महानगरपालिकाका २४, गोदावरी नगरपालिका ललितपुरका १९, सिंचाइ विभाग ललितपुरका १४, यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना ललितपुरका १३ कर्मचारीले पनि पेशागत अनुशासन उल्लंघन गरेको पाइयो ।
यसरी अनुशासन उल्लंघन गर्नेहरूलाई कारवाहीका लागि सम्बन्धित कार्यालयलाई सिफारिस गरिएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी डालनाथ अर्यालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कान्ति बाल अस्पतालका ५४ र ललितपुर महानगरपालिकाका २७ जनामाथि विभागीय कारवाही भएको जानकारी सतर्कता केन्द्रलाई प्राप्त भएको उनले बताए ।
वर्षाका कारण दुईतले घर भत्कियो
विहानैदेखि वर्षा, बाढी आउन सक्ने भन्दै महाशाखाले गरायो सतर्कता
बन्ने भयो संसदको आफ्नै भवन, प्रधानमन्त्रीले गरे शिलान्यास
हत्या आरोपमा २ जना जेल चलान
पहिरोबाट पुरिएका बालक खोजी गरिँदै
कानून मिचेर बढी जग्गा राख्नेलाई छूट, हदबन्दीको मर्ममै प्रहार ! काठमाडौं – विषेश प्रयोजनका लागि हदबन्दी छूटको स्वीकृति लिएर जग्गा खरिद गर्नसक्ने कानूनी प्रावधान हुँदाहुँदै कानूनलाई बेवास्ता गरी जग्गा राख्नेहरूले उन्मुक्ति पाउने भएका छन् । जबकि विद्य...
मोदी र शीबीचको कुराकानीमा कश्मीरको विषय नउठाइने